गोप्य मतदानको बाधक प्रहरी नै किन ? « Naya Page
गोप्य मतदानको बाधक प्रहरी नै किन ?
काठमाडौं: गोप्य मतदानबाट जनप्रतिनिधि चुनिने संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था छ। मतदाता पनि आफैंले मतदान गरेको मतपत्र सार्वजनिक गरे सजायको भागिदार हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। आफूले गरेको मतदानको तस्बिर बाहिर नल्याउन भनेरै मतदान केन्द्रमा मोबाइलसमेत निषेध गरिएको छ।
पूर्वकार्यबाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङले पर्यवेक्षणका क्रममा काठमाडौंका दुई मतदान केन्द्रमा आफूले सुरक्षाकर्मीलाई मतपेटिकाभन्दा पर बस्न सुझाएको सुनाए। उनको बुझाइमा समेत मतदान केन्द्रमा प्रहरीको ड्युटी गर्ने स्थान कताकता नमिलेको देखिन्छ।
‘मतपेटिकाको छेवैमा राइफल तानेर प्रहरी उभिएको पाएँ, प्रहरी इन्चार्जलाई यो ठीक होइन, अलि टाढा राख्नुस् भनेर आग्रह गरें,’ उनले भने, ‘अब्जर्भरको काम त्यो त होइन तर, ठीक नलागेर सुझाएँ। एक ठाउँमा प्रहरीले सुने अर्को ठाउँमा मतदान अधिकृतमार्फत भनेको थिएँ। प्रहरीले टेरेको देखिएन।’ उनले मतदातालाई कुनै प्रकारको प्रभाव पर्ने हिसाबले सुरक्षा निकायको उपस्थिति हुन नहुने बताए।
मतपेटिका बोकेर भाग्ने, मतपेटिकामा आगो लगाउने, एसिड वा पानी हाल्नेजस्ता घटना भएका छन्। त्यसैको परिणामले मतपेटिका छेवैमा प्रहरी उभिन्छन्। प्रहरीले आफ्नो प्रमुख जिम्मेवारी नै मतपेटिकाको सुरक्षा मानेका हुन्छन् । प्रहरीलाई मुख्य गरी मतपेटिका, मतपत्रकै सुरक्षामा केन्द्रित रहने गरी तालिम र निर्देशन हुने गरेकाले पनि त्यस्तो अवस्था निम्तिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहिसकेका गृहका एकजना सहसचिव बताउँछन्। ‘गणनास्थलसम्म मतपेटिका सुरक्षित पुर्‍याए प्रहरीको सफलता मानिन्छ, मतदान केन्द्रमा खटिएका प्रहरीले स्याबासी पाउँछन्,’ उनले भने, ‘त्यसैलाई विशेष ध्यान दिएर सुरक्षा योजना बनाउँदा समस्या आएको हो।’
सिंहदरबारको गेटमा खटिएका प्रहरीले गर्ने चेकजाँच र परिचयपत्रमा फोटो भिडाएजस्तै मतदान केन्द्रका प्रहरीले ढोकामै कडा गर्नुपर्ने हो। तर, मतदान केन्द्रको ढोका हतियारविहीन म्यादी प्रहरीको जिम्मामा राखिन्छ।
पूर्वआयुक्त गुरुङले पनि गोप्य मतदानको अधिकार भंग हुने गरी वा कुनै प्रकारको मनोवैज्ञानिक प्रभाव पर्ने गरी प्रहरीको उपस्थिति हुन नहुने बताउँछन्। गोप्य मतदानको कसैले कुनै प्रकारको सुइँको पाउनु हुँदैन, संवेदनशिल क्षेत्रमा कसैको आवतजावत वा उपस्थिति हुनु हुँदैन, यसमा जिम्मेवार निकायले ध्यान दिनैपर्ने उनी बताउँछन्।
राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समितिका उपाध्यक्ष कपिल श्रेष्ठ मतदान केन्द्रभित्र हतियारधारी प्रहरीको उपस्थितिलाई पुरानै पञ्चायती संस्कार भन्छन्। ‘अधिकांश स्थानमा मतदाताले मतपत्रमा छाप लगाउने स्थानमा मतपेटिकासँगै बन्दुक ताकेर प्रहरी उभिएको देखियो,’ उनले भने, ‘कसले कसलाई भोट गरेको छ, सुरक्षाकर्मीले हेरिरहेका हुन्छन्। त्यो सरासर गलत हो।’ राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकहरूले मतदान केन्द्रमा हतियारधारी प्रहरी नराख्न धेरै पटक आयोगलाई सुझाइसकेको उनले बताए। यो समचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।